ယောကျြား က အပွီးတိုငျ ရဟနျးဝတျခဲ့ရငျ မိနျးမ(မယား)ကို ကှာရှငျးဖို့ လိုပါသလား…….. – Shwe Likes
G Shwe | June 4, 2021 | Knowledge | No Comments
ရဟနျး ဝတျတယျဆိုတာ Renounce လုပျတာပဲ။ Renounce ဆိုတာ ဘာတှကေို စှနျ့လှတျရတုနျးဆို ဆှမြေိုးတှကေို စှနျ့လှတျရတယျ၊ ကိုယျပိုငျတဲ့ပစ်စညျးဥစ်စာတှကေို စှနျ့လှတျရတယျ။ ဆှမြေိုးဆိုတဲ့အထဲမယျ ကိုယျ့အိမျထောငျဘကျကိုလညျး စှနျ့လှတျရတယျ။ အဲဒါတှကေို Renounce လုပျပွီး ရဟနျးဝတျ ရတာ။ ရှေးခတျေ ထုံးတမျးစဉျလာက အဲလို။
သို့သျော အပွီးတိုငျ ကှာရှငျးပေးခဲ့သငျ့ပါသလားဆိုတဲ့ မေးခှနျးကတြော့ ကှာရှငျးပေးသညျဖွဈစေ မပေးသညျဖွဈစေ ရဟနျးဝတျလို့ရှိရငျ အဓိက,က မိနျးမဆီမှာ ခှငျ့မပနျရဘူး။ မိဘဆီမှာပဲ ခှငျ့ပနျရတယျ။ အမြိုးသမီးက သဘောတူတူ မတူတူ သူက အလိုအလြောကျ ရဟနျးဖွဈသှားရငျ ကှာရှငျးပွီးသား ဖွဈသှားတယျ။ ပိုငျဆိုငျမှုတှအေားလုံး စှနျ့လှတျပွီးသား ဖွဈသှားတယျ။ ရှေးထုံးစံကို ပွောပွတာပေါ့ နျော။ ဘုရားလကျထကျက ထုံးစံဆိုရငျ အပွီးတိုငျကှာရှငျးပေးဖို့ဆိုတာ ခုခတျေလို တရားဝငျကှာရှငျးခှငျ့ လုပျတာမြိုး မရှိဘူး။ သူ သင်ျကနျးဝတျသှားတာနဲ့တပွိုငျနကျ ကှာရှငျးပွီးသား ဖွဈသှားပွီ။ အဲသလို ဆိုလိုတယျ။
ကှာရှငျးခှငျ့မပေးဘဲ ရဟနျးဘောငျထဲဝငျသှားရငျ အကွငျလငျမယားအဖွဈ အရာရောကျနဆေဲလား? ဆိုတော့ လငျမယားလို သှားနရေငျတော့ ဘုနျးကွီးဘဝက စှနျ့လှတျရမယျ။ မကြူးလှနျရငျတော့ နလေို့ရတယျ။ မွတျစှာဘုရား တောထှကျတရားကငျြ့တော့ ယသောဓရာနဲ့ သူ ကှာရှငျးခဲ့တာမှ မဟုတျဘဲ။ သို့သျောလညျး မပတျသကျဘူးဆိုတာ သိသှားပွီလေ။
– ခနျြထားခံခဲ့ရတဲ့ အမြိုးသမီးတှကေတြော့ နောကျထပျ အိမျထောငျပွုလို့ ရပါသလားဘုရား။
ရတယျ ရတယျ… အမြိုးသမီးတှမှော အိန်ဒိယထုံးစံအရ ပွောရမယျဆိုရငျ သူတို့မှာ သားယောကျြားထှနျးကားမှ ယောကျြားရဲ့အမှကေို ခံယူခှငျ့ရှိတယျ။ သားယောကျြား မထှနျးကားရငျ အဝတျတဈထညျကိုယျတဈခုနဲ့ပဲ အိမျပျေါက ဆငျးရတယျ။ ဘာမှ ပိုငျဆိုငျခှငျ့ မရှိဘူး။ သားယောကျြားထှနျးကားရငျ သားယောကျြားကိုအကွောငျပွုပွီး အမှခေံလို့ ရတယျ။ ဒါ အိန်ဒိယရဲ့ ထုံးတမျးစဉျလာပဲ။
ဒါကွောငျ့မို့လို့ သား မထှနျးကားဘူးဆိုရငျ သူတို့ဘဝအတှကျ တအားစိုးရိမျကွတယျ။ ခုခတျေကတော့ အဲလို မရှိတော့ပါဘူး။ အနောကျတိုငျးကဆို တအားဆိုးသေး… ကှာရှငျးရငျ ယောကျြားက အမြားကွီးလြျောရတယျ။ လူမှုနဲ့သကျဆိုငျတယျ။ ဘာသာနဲ့ မသကျဆိုငျဘူး ဒါတှကေ နျော။
ရဟန်း ဝတ်တယ်ဆိုတာ Renounce လုပ်တာပဲ။ Renounce ဆိုတာ ဘာတွေကို စွန့်လွှတ်ရတုန်းဆို ဆွေမျိုးတွေကို စွန့်လွှတ်ရတယ်၊ ကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို စွန့်လွှတ်ရတယ်။ ဆွေမျိုးဆိုတဲ့အထဲမယ် ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဘက်ကိုလည်း စွန့်လွှတ်ရတယ်။ အဲဒါတွေကို Renounce လုပ်ပြီး ရဟန်းဝတ် ရတာ။ ရှေးခေတ် ထုံးတမ်းစဉ်လာက အဲလို။
သို့သော် အပြီးတိုင် ကွာရှင်းပေးခဲ့သင့်ပါသလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကျတော့ ကွာရှင်းပေးသည်ဖြစ်စေ မပေးသည်ဖြစ်စေ ရဟန်းဝတ်လို့ရှိရင် အဓိက,က မိန်းမဆီမှာ ခွင့်မပန်ရဘူး။ မိဘဆီမှာပဲ ခွင့်ပန်ရတယ်။ အမျိုးသမီးက သဘောတူတူ မတူတူ သူက အလိုအလျောက် ရဟန်းဖြစ်သွားရင် ကွာရှင်းပြီးသား ဖြစ်သွားတယ်။ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံး စွန့်လွှတ်ပြီးသား ဖြစ်သွားတယ်။ ရှေးထုံးစံကို ပြောပြတာပေါ့ နော်။ ဘုရားလက်ထက်က ထုံးစံဆိုရင် အပြီးတိုင်ကွာရှင်းပေးဖို့ဆိုတာ ခုခေတ်လို တရားဝင်ကွာရှင်းခွင့် လုပ်တာမျိုး မရှိဘူး။ သူ သင်္ကန်းဝတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက် ကွာရှင်းပြီးသား ဖြစ်သွားပြီ။ အဲသလို ဆိုလိုတယ်။
ကွာရှင်းခွင့်မပေးဘဲ ရဟန်းဘောင်ထဲဝင်သွားရင် အကြင်လင်မယားအဖြစ် အရာရောက်နေဆဲလား? ဆိုတော့ လင်မယားလို သွားနေရင်တော့ ဘုန်းကြီးဘဝက စွန့်လွှတ်ရမယ်။ မကျူးလွန်ရင်တော့ နေလို့ရတယ်။ မြတ်စွာဘုရား တောထွက်တရားကျင့်တော့ ယသောဓရာနဲ့ သူ ကွာရှင်းခဲ့တာမှ မဟုတ်ဘဲ။ သို့သော်လည်း မပတ်သက်ဘူးဆိုတာ သိသွားပြီလေ။
– ချန်ထားခံခဲ့ရတဲ့ အမျိုးသမီးတွေကျတော့ နောက်ထပ် အိမ်ထောင်ပြုလို့ ရပါသလားဘုရား။
ရတယ် ရတယ်… အမျိုးသမီးတွေမှာ အိန္ဒိယထုံးစံအရ ပြောရမယ်ဆိုရင် သူတို့မှာ သားယောက်ျားထွန်းကားမှ ယောက်ျားရဲ့အမွေကို ခံယူခွင့်ရှိတယ်။ သားယောက်ျား မထွန်းကားရင် အဝတ်တစ်ထည်ကိုယ်တစ်ခုနဲ့ပဲ အိမ်ပေါ်က ဆင်းရတယ်။ ဘာမှ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် မရှိဘူး။ သားယောက်ျားထွန်းကားရင် သားယောက်ျားကိုအကြောင်ပြုပြီး အမွေခံလို့ ရတယ်။ ဒါ အိန္ဒိယရဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာပဲ။
ဒါကြောင့်မို့လို့ သား မထွန်းကားဘူးဆိုရင် သူတို့ဘဝအတွက် တအားစိုးရိမ်ကြတယ်။ ခုခေတ်ကတော့ အဲလို မရှိတော့ပါဘူး။ အနောက်တိုင်းကဆို တအားဆိုးသေး… ကွာရှင်းရင် ယောက်ျားက အများကြီးလျော်ရတယ်။ လူမှုနဲ့သက်ဆိုင်တယ်။ ဘာသာနဲ့ မသက်ဆိုင်ဘူး ဒါတွေက နော်။
အရှင်ခေမိန္ဒ ၏ Facebook စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
သုဝဏ္ဏသျှမ် စာဖတ်သူတစ်ယောက်၏ မှတ်စုများ